यौन जिज्ञासा र समाधान - साप्ताहिक
डा. राजेन्द्र भद्रा, जेष्ठ ३०, २०७६
शारीरिक फरिश्रम युक्त त्रियाकलाप सकिएपछि मुटुको गति कम भए पनि मांसपेशीमा भएका रक्त नसा पुरानै नखुम्चिएको अवस्थामा रह्यो भने रक्तचाप अकस्मात कम हुनसक्छ र व्यक्तिले अल्पकालीन बेहोसीको अनुझव गर्न सक्छ, जसलाई हामी abdominal heart rhythm भन्छौं । यस्तो अन्य शारीरिक क्रियाकलापका साथै यौन क्रियाकलापको सन्दर्भमा पनि हुन सक्छ । पुरा पढ्नुहोस्
डा. राजेन्द्र भद्रा, जेष्ठ २३, २०७६
महिलामा भियाग्राको प्रयोग औषधी बनाउने कम्पनीहरूकै संलग्नतामा गरिएको एक अध्ययनले केही सकारात्मक कुरा देखाएका छन्, तर त्यसको निष्पक्षतामा स्वभाविक रूपमै प्रश्न उठ्ने भयो, त्यसैले अहिले ती अध्ययनले देखाएका सबै कुरामा विश्वास गरिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन । पुरा पढ्नुहोस्
डा. राजेन्द्र भद्रा, जेष्ठ १७, २०७६
यौनका सन्दर्भमा लामो समयसम्म मानिस गन्धमा भर नपरी दृष्टिमा भर पर्छ भन्ने मानियो तर पछिका अनुसन्धानले गन्धको प्रभाव यौनसाथी चयन गर्ने कार्यमा पर्ने देखियो । हामीलाई थाहै छ मानव भावना अनि यौनमा सुगन्धको प्रभाव पर्छ । मानव पसिना, पिसाव, सास, थूक, स्तनवाट निस्कने दुध, छालाका ग्रन्थिबाट निस्कने तैलीय पदार्थ वा यौन रस सबैमा सुगन्ध सम्प्रेषण गर्ने पुरा पढ्नुहोस्
डा. राजेन्द्र भद्रा, जेष्ठ २, २०७६
दम्पतीबीच एक–अर्काको भावनालाई सम्मान नगर्नु, बेवास्ता गरिएको अनुभूति हुनु, यौन नैराश्यताले ग्रसित हुनु, उनीहरूमाझ साथै बस्ने चाहना नहुनु, भावनात्मक अन्तरड्ड सम्बन्ध नहुनु जस्ता कुराले वैवाहिक सम्बन्धभन्दा बाहिर सम्बन्ध स्थापित गर्नेतर्फ डोर्‍याउँछ, तर तपाईंको सन्दर्भका विवाहित हुँदाहुँदै पनि किन यसरी अर्को व्यक्तिसँग सम्बन्ध राख्नुभएको हो भन्ने कुरा प्रश्नमा त्यति स्पष्ट छैन । पुरा पढ्नुहोस्
गर्भधारणका लागि एउटा शुक्रकिट मात्र चाहिन्छ तर एकपटकको वीर्य स्खलन (इजाकुलेसन) मा लाखौ शुक्रकीट निष्कासन हुन्छन् । कुनै–कुनै अवस्थामा वीर्य स्खलनभन्दा अघि पनि केही माक्रामा वीर्य निष्कासन हुन्छ र त्यसमा शुत्रकिट रहने भएकाले गर्भ रहन सक्छ । पुरा पढ्नुहोस्
डा. राजेन्द्र भद्रा, वैशाख १९, २०७६
यौन क्रियाकलापमा राम्रोसँग र निरन्तर रुपमा संलग्न हुन एकातिर यौनेच्छा हुनुपर्छ भने अर्कातिर मानसिक एवं शारीरिक दुवै रूपमा व्यक्ति यौन सम्पर्कका लागि तयार हुनुपर्छ । शारीरिक कारणको कुरा गर्दा यौन सम्पर्क राख्दा पीडा हुने, कुनै रोगव्याधि वा दीर्घरोगको असर वा थकान यसका उदाहरण हुन् । पुरा पढ्नुहोस्
पाठेघर झिकिएको भए पनि योनिमार्ग झिकिएको हुँदैन, तर आङ खसेर योनिमार्गबाट पाठेघर झिकिएको अवस्थामा योनिमार्ग सानो हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा यौनसम्पर्क गार्‍हो वा पीडादायक हुन सक्छ । अन्य अवस्थामा शल्यक्रिया गरेर पाठेघर झिकिए पनि यौनसम्पर्क गर्न मिल्ने र सामान्य हुन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
डा. राजेन्द्र भद्रा, चैत्र २८, २०७५
यौनांग क्षेत्रको मांसपेसीलाई बलियो बनाउन गरिने कसरतलाई केगेल -Kegel_ कसरत भनिन्छ । योनिमा औंला पसाई औंलालाई अँठ्याउने अर्थात् खुम्च्याउने गर्दा यो मांसपेशीलाई तपाईले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ । उक्त मांसपेशी पहिचान गरेपछि औंला नपसाई पनि खुम्च्याउन सकिन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
डा. राजेन्द्र भद्रा, चैत्र २१, २०७५
हस्तमैथुनको लत भएर अति हस्तमैथुन गर्ने स्थितिमा पुग्दा घण्टौंसम्म यौन चलचित्र हेरेर बिताउने र व्यक्तिको उत्पादनशीलतमै नकारात्मक असर पर्ने हुन्छ । यौन कार्यमा अवास्तविक अपेक्षा अनि पारिवारिक सम्बन्धमा समस्या, आत्म सम्मानको कमी तथा असामाजिक बानी बेहोरा देखाउने जस्ता कुरा देखापर्न सक्छन् । पुरा पढ्नुहोस्
डा. राजेन्द्र भद्रा, फाल्गुन ३०, २०७५
वीर्य स्खलन हुनासाथ यो केही बाक्लो जेलीजस्तै हुन्छ र केही बेरपछि मात्र पातलिने क्रम सुरु हुन्छ । वीर्य स्खलन हुनासाथको अवस्थामा यसमा भएको प्रोटिनले बाक्लो, निकै च्यापच्यापे स–साना दानाजस्तो बनाउन सहयोग गर्छ । यस्तो प्रकृतिको हुँदा वीर्य योनिमै टाँसिने र सजिलै बाहिर नआउने हुँदा प्रजनन क्षमतामा सकारात्मक असर पर्छ । पुरा पढ्नुहोस्